राप्रपाको नेतृत्व अब दोस्रो पुस्तामा आउनु पर्छ – डा. धबल शमशेर राणा :: नारायण खड्का :: Setopati
राप्रपाको नेतृत्व अब दोस्रो पुस्तामा आउनु पर्छ – डा. धबल शमशेर राणा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल सम्शेर राणाले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण हुने बताएका छन्।
आसन्न महाधिवेशनका सन्दर्भमा जिल्ला जिल्लामा नेता कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा शुक्रबार दाङ आएका नेता राणाले पत्रकारसँगको कुरा गर्दै आफू पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षमा लड्ने बताएका हुन्।
राप्रपाका सवै खेमाहरू एकीकृत भएर एउटै राप्रपा बनिसकेपछि आगामी महाधिवेशनमा दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व लिन नेता जयन्त चन्द, राजेन्द्र लिंग्देन, बिक्रम पाण्डे र डा. धवल सम्शेर राणाको विशेष चर्चा भइरहेको समयमा राणाले आफू अध्यक्षमा लड्ने भन्दै जिल्ला दौडाहा तिब्र पारेका छन्।
‘हामी चार जना साथीबीचमा आगामी नेतृत्व कसले लिने? भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ राणाले भने, ‘त्यसमा मै पनि अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नसक्छु।’
उनले अग्रज नेताको सम्मान गर्दै दोस्रो पुस्ताका सबै नेता नेतृत्व लिन सक्षम रहेको तर्क गरे।
अग्रज नेतृत्वको उच्च सम्मान गर्दै उहाँहरूको अनुभव ग्रहण गरि दोस्रो पुस्ताले नेतृत्व गरेर राप्रपालाइै नयाँ उर्जा दिने अभियानमा आफू लागेको उनले बताए।
हिन्दु राज्य र राजासहितको प्रजातन्त्रको अभियानमा राप्रपा रहेको स्पष्ट पार्दै नेता राणाले सुशासनयुक्त सभ्य समाज, भ्रष्टाचाररहित राज्य, रोजगारीका अवसरहरु बृद्धि गरी मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनु राप्रपाको मुख्य राजनीतिक कार्यदिशा रहने बताए ।
‘मुलुकमा अहिले संघीयता र गणतन्त्र पूर्ण रूपमा असफल भइसक्यो,’ राणाले दाबी गरे, ‘आर्थिक पारदर्शिता कमजोर भएर भ्रष्टाचार व्याप्त भएको छ र हामीले परिकल्पना गरेजस्तो गणतान्त्रिक अभ्यास हुन सकेको छैन। त्यसैले अब राप्रपामा दोस्रो पुस्ता अगाडि आउनुपर्छ।’
राप्रपा नयाँ राज्य व्यवस्थाको पक्षमा रहेको भन्दै मेयर राणाले सानो आकारको संघीय सरकार र शक्ति सम्पन्न सानै आकारको स्थानीय सरकारसहितको राज्य बनाउन जरुरी रहेको धारणा राखे।
वर्तमान मोडेलको संघीयताका कारण मुलुक आर्थिक रुपमा पनि ध्वस्त भइसकेको उल्लेख गर्दै अहिलेको मोडेलको संघीयता नेपाल जस्तो मुलुकलाई थेग्नै नसक्ने गरी आर्थिक भार परिरहेको राणाको भनाई थियो।
मुलुकको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले देश अभिभावकविहिन अवस्थामा पुगेको दाबी गरेका राणाले सरकार प्रमुख देशको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पुरै असफल भएको आरोप लगाए।
उनले विद्यमान परिस्थितिबाट पार पाउन राप्रपाको राजनीतिक मुख्य ऐजेण्डा संबैधानिक राजसंस्था सहितको हिन्दु राज्यको अबधारणा आवश्यक रहेको बताए।
‘अहिलेको संविधान पनि अपरिवर्तनीय छैन। दुई तिहाइ बहुमतले संविधान चेञ्ज गरेर होस् वा हिन्दु राज्य र राजासहितको प्रजातन्त्रका सन्दर्भमा जनमत संग्रह गरेर पनि निर्णय लिन सकिन्छ’, मेयर राणाले अगाडि भने, ‘राप्रपा दुवै विकल्प मध्ये एउटा विकल्प प्रयोग गरी हिन्दु राज्य र राजासहितको प्रजातन्त्रका विषयमा अगाडि बढ्नेछ।’
८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु भएको मुलुकमा धर्म निरपेक्षता लाद्नु नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रतामाथिकै आघात भएको राणाले बताए। संविधान संशोधन गर्न नसकिने भए जनमत संग्रहबाट पनि धर्मनिरपेक्षता हटाएर मुलुकलाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो ।
फरक प्रसंगमा उनले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) पारित गर्न नहुने बताए । त्यो सम्झौता राष्ट्रियताको लागि घातक रहेको उनको दाबी थियो।
‘म एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा पूर्ण रुपमा असहमत छु’, राणाले भने।
त्यस्तै उनले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका संघीय र प्रदेश सरकार भन्दा स्थानीय सरकारले अहम भूमिका निर्वाह गरेको तर्क गरे।
राप्रपाको आगामी एकता महाधिवेशन कार्तिक २७ देखि ३० सम्म काठमाडौंमा गर्ने गरि मिति सार्वजनिक भइसकेको छ।
त्यसका लागि अहिले जिल्लामा वडा अधिवेशन भइरहेको राप्रपा दाङका नेता क्षेत्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
वडा अधिवेशन सकिए लगत्तै भदौ २७ र २८ गते क्षेत्रीय अधिवेशन हुने नेता बस्नेतले बताए।
जिल्ला अधिवेशन असोज पहिलो साता सम्पन्न गर्ने तयारी राप्रपा दाङले गरेको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २५, २०७८, २३:१५:००
एनआरएनको महाधिवेशन नरोक्न उच्च उदालत पाटनको आदेश